ဗဟုသုတ Archives - Richard Myo Thant
304 Pageviews ရွက်ဖျင်တဲထဲမှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်နေရင်း ရုတ်တရက်လန့်နိုးလာတယ်။ ဘာသံမှကြားလို့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာတောထဲမှာ သတိနဲ့လူသားစားကျားတွေကိုရင်ဆိုင်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ အန္တရာယ်ဟာ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်တယ်။ အိပ်ရာဘေးမှာကျည်ထည့်ပြီးအဆင်သင့်မောင်းထိုးထားတဲ့ရိုက်ဖယ်သေနတ်ဆီလက်ကအလိုလိုရောက်သွားချိန်မှာပဲ ရွက်ဖျင်တဲအဝကနေ “မလှုပ်နဲ့” ဆိုပြီးအမိန့်ပေးတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျနော့်ရွက်ဖျင်တဲအဝမှာ အရိပ်တစ်ခုကမားမားမတ်မတ်ရပ်နေပါတယ်။ လက်ထဲမှာ ၁၂ ဗို့သေနတ်ကကျနော့်ဆီကိုချိန်ထားပါတယ်။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားရောက်နေပါပကော။ ကောဗရီမြစ်နားက ချိုင်နားမြစ်ကမ်းဘေးရှိ ၁၂ ဧကရှိတဲ့ကျနော့်ရဲ့စိုက်ခင်းကိုအလည်သွားချိန်မှာ ကျနော့်ရဲ့စိုက်ခင်းစောင့်’ရမ်ဂ’က ခြံထဲမှာရွက်ဖျင်တဲမထိုးပဲ သူနဲ့လာအိပ်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆင်ဆိုးရှိတယ်ဆာဟစ် (Sahib ဆိုတာသခင်/အကြီးအကဲလို့ ကိုလိုနီခေတ်ကလေးစားသမှုနဲ့ခေါ်တာပါ) တစ်ယောက်တည်း Tent ထိုးအိပ်ရင်အန္တရာယ်များတယ်။ ဆင်ဆိုးရှိကြောင်းမကြားမိသလို ဒီအချိန်ဟာဒီချိုင်နားမြစ်ထဲမှာရေတစ်စက်မှမရှိတဲ့နွေရာသီဖြစ်ပြီး ဆင်တွေကကောဗရီမြစ်ဖက်မှာပဲရှိတဲ့အချိန်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ရမ်ဂက အသံခပ်အုပ်အုပ်နဲ့ Mumptyvayan ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဒီနားမှာရှိနေတယ် ဆာဟစ်လို့ပြောပါတယ်။ ဟာ … အဆင်ပြေတာပေါ့။ မန်မတီဗရမ်း Mumptyvayan ဗိုလ်ဂေါ်ပြားကိုငါတွေ့ချင်တယ်လို့သွားပြောလိုက်ကွာ။ အမလေး … ဆာဟစ်သခင်ရယ် ကျနော်ကတောပုန်းဓားပြဗိုလ်နဲ့ ဘယ်လိုလို့ပတ်သက်မှာလဲလို့ သူ့ကိုယ်သူအရိုးသားဆုံးလူတစ်ယောက်ပုံနဲ့ ရမ်ဂကပြန်ဖြေပါတယ်။ တကယ်တော့ရမ်ဂကလည်းခေသူမဟုတ်ပါ။ ထောင်ကျဖူးသူပါ။ အမှုကတော့သူ့ပထမမိန်းမကိုသတ်မှုပါ။ အဲ့ဒီအမှုမှာသူသတ်တယ်ဆိုတာ ရဲကသဲလွန်စဖော်လိုက်နိုင်ပြီး ကံကောင်းလို့ကြိုးပေးမခံရတာပါ။ ဒုတိယမိန်းမမှာတော့ သူနဲ့ပြဿနာတက်ချိန်မှာ လက်စမပေါ်ပဲသူရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရဲကသူ့မိန်းမရဲ့ဦးလေးကိုခေါ်စစ်လေရဲ့။ ဒီလိုပဲ တောမှာကတော့ ဘယ်သူမှမျက်မြင်သက်သေမရှိတော့ မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးကို သူသတ်တယ်လို့ပဲသံသယရှိကြပြီး ဘယ်သူမှတပ်အပ်မပြောနိုင်ဘူးမလား? အဲ … ရမ်ဂကတတိယမိန်းမကိုတော့မသတ်ဘူးခင်ဗျ။ စတုတ္ထမိန်းမထပ်ယူပြီး သူတို့အချင်းချင်းနောင်ဂျိန်သတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ သူက နံပါတ် ၅ နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေလေရဲ့။ရမ်ဂက အဲ့လိုအကောင်။ တောရွာတွေမှာကဆင်းရဲတော့ ရမ်ဂလိုအလုပ်ကလေးအကိုင်လေးနဲ့အကောင်အတွက် မိန်းမပေါပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသာ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာ ရမ်ဂအတွက်ကတော့ မိန်းမထပ်ရှာတာ ခေါက်ဆွဲစားချင်လို့ instant noodle ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲထုပ်ဖောက်ပြီးပြုတ်ရသလောက်မကြာပါ။ ထားပါတော့ … စောနကအကြောင်းပြန်ဆက်ရရင် မန်မတီဗရမ်းဆိုတာ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားမှာနားထင်အထိကော့ထောင်နေနဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးနှစ်ဖက်ရှိပြီး နဖူးပြောင်တာကြောင့် ဂေါ်ပြားရုပ်ပေါက်နေလို့ပါ။ 🇮🇳 အိန္ဒိယအစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဝရမ်းပြေးစာရင်းထဲမှာဒီလိုရေးပါတယ်။ နာမည်အရင်းSelvaraj အသက် ၃၆ နှစ်၊ အရပ် ၅ ပေ ၇ လက်မ၊ ညာမျက်လုံးထောင့်ကနေနားရွက်အထိ ထင်ရှားတဲ့အမာရွတ်ရှိလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယရဲမှတ်တမ်းမှာမပါတာက ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာမရှိဆင်းရဲသားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခံရတဲ့ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကရော်ဘင်ဟုတစ်ယောက်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာချမ်းသာပြီးလောဘကြီးတဲ့လူကုံထံတွေကိုသာရွေးဓားပြတိုက်ပြီးမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုဝေငှပေးနေသူပါ။ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရော်ဘင်ဟုအဖြစ် ဗိုလ်ဂေါ်ပြားထက်နာမည်ကြီးတာကတောပုန်းကြီးမန်ဆင်းပါ။ (တောပုန်းကြီးမန်ဆင်း Man Singh အကြောင်းကိုတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ Sholay ရှိုးလေးဆိုပြီးရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားကာ မင်းသားကြီးအမိတာဘဂျမ်းက Jai အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဟိုခေတ်ကရုပ်ရှင်ရုံပြည့်ရုံမကရုံလျှံခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေအကြိုက်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။) အခုဗိုလ်ဂေါ်ပြားအကြောင်းဆက်ရရင် သူ့အကြောင်းခဏခဏကြားတာရယ် ကျနော်ကလည်းဒီနယ်မှာတကိုယ်တည်းသွားလာနေသူဆိုတော့ သူနဲ့တွေ့ဖူးချင်ပါတယ်။ တစ်ခါကဆည်ဆောက်ရန်တိုင်းတာဖို့ မျက်နှာဖြူအင်ဂျင်င်နီယာတစ်ယောက်နဲ့သူ့ကိုယ်ရံတော်အစောင့်တစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ ကျနော်ကသစ်တောတွေကိုရှင်းပြီးဆည်ဆောက်တာမကြိုက်တာနဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသွားတွေ့ချိန်မှာ မျက်နှာဖြူအင်ဂျင်နီယာရဲ့လက်နက်ကိုင်အစောင့်နဲ့တွေ့တော့ဗိုလ်ဂေါ်ပြားအကြောင်းစကားစပ်မိပြီး ကျနော်ကဗိုလ်ဂေါ်ပြားကိုမြင်ဖူးချင်ကြောင်းပြောပြမိပါသေးတယ်။ မျက်နှာဖြူအင်ဂျင်နီယာက သူလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတွေ့ဖူးချင်ကြောင်းကျနော်တို့ကိုရယ်ရယ်မောမောဝင်ပြောပါတယ်။ အမလေး … ဆာဟစ်သခင်ကြီးတို့ရယ် ကျနော်ကသူနဲ့တွေ့မှာကြောက်လွန်းလို့။ အန္တရာယ်များပါဘိသနဲ့တွေ့ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လို့ အစောင့်ကပျာပျာသလဲပြောဆိုပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ဒေသခံတွေသူရဲကောင်းလို့ပြောနေတဲ့ ရော်ဘင်ဟုတစ်ယောက်ကိုကိုယ်တွေ့မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်တွေ့ဖူးချင်တာပါ။ ဟော … ကျနော်တွေ့ဖူးချင်တဲ့ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာ ကျနော့်ရွက်ဖျင်တဲဝမှာရောက်နေပါပြီ။ လသာတဲ့ညမို့ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားကိုရွက်ဖျင်တဲဝမှာသေသေချာချာမြင်ရပါတယ်။ ကာကီရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေးကားကားကြီးနဲ့ ကျည်ဆံခါးပတ်ကြီးကိုပခုံးသိုင်းပြီးလွယ်ထားပါတယ်။ နောက်ပခုံးတစ်ဖက်မှာမှန်ဘီလူးတစ်ခုကို လယ်သာသားရေအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးဆွဲထားပါတယ်။ ခါးမှာဓားမြှောင်တစ်လက်နဲ့ သူ့လက်ထဲက ၁၂ ဗို့သေနတ်ကကြေးရောင်သေနတ်ပြောင်းကို လရောင်ထဲမှာလက်ကနဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ “White man မျက်နှာဖြူ …. အသက်မသေချင်ရင် လက်ကိုအပေါ်မြောက်ထား၊ ရှိတဲ့ငွေအကုန်ထုတ်၊ ပြီးရင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမှောက်နေ၊ လုံးဝမော့မကြည့်နဲ့ သေသွားမယ်။” ကျနော်ကသူ့ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြည့်လိုက်ရင်း “ငါမင်းကိုသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြားထားပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့တွေ့ချင်ခဲ့တာ။ အခုတော့မင်းကရဲတွေပြောသလို သူခိုးဓားပြပါပဲလားကွ!” သူကရှူးရှူးရှဲရှဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားက သေနတ်ကိုမြှောက်ကာ မောင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ “မင်းငါ့ကိုပစ်သတ်ရင်ပြဿနာအရမ်းကြီးသွားမယ်။ မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်ကို မန်မတီဗရမ်းက ဓားပြတိုက်ပစ်သတ်သွားတယ်ဆိုရင် သတင်းစာတွေထဲမှာဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားပြီး တတိုင်းပြည်လုံးသိသွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် မိုးမီးလောင်ပြီ။ သတင်းစာတွေကပိုပိုသာသာဖွတာနဲ့ မင်းကိုအသေရရအရှင်ရရ ရဲကဆုကြေးတိုးထုတ်တော့မယ်။ သတင်းစာကမရေးဘူးပဲထား မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်ကိုသတ်မှုဖြစ်လို့ ရဲမင်းကြီးကလူသတ်ကောင်ကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ရင် အရှက်အကြီးအကျယ်ကွဲပြီ။ အဲ့ဒီတော့မင်းကိုတွေ့ရာသင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်းလိုက်တော့မယ်။ ဆုကြေးတွေတနင့်တပိုးထုတ်တော့မယ်။ မင်းကိုအခုချစ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းအနားကလူတွေက “သိန်း ၃၀၀ ပေးရင် မောင်ကျော်ဘယ်မှာလဲဖော်မယ့်” ငွေနောက်လိုက်မယ့်အောက်တန်းစားအကောင်တွေချည်းပဲ။ ရဲကမဖမ်းဘူးပဲထားပါအုံး။ ငါ့လိုဒေသခံတွေနဲ့အတူလက်ပွန်းတတီးတသားထဲနေပြီးလူသားစားကျားရန်ကနေ သူတို့ကိုကာကွယ်နှိမ်နင်းပေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုဓားပြတိုက်ပြီးသတ်ရင်မင်းကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်မှာလဲ? သူရဲကောင်းအဖြစ်လေးစားအုံးမှာလား?“ ဒီတစ်ချီမှာတော့ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားအရှိုက်ထိသွားပါတယ်။ သေနတ်ဒင်ကိုမြေကြီးပေါ်ချထောင်လိုက်ရင်း လေသံပြောင်းသွားကာ … “ဆာဟစ်ဟာ ကျနော်ကြားဖူးသလို တကယ်သတ္တိကောင်းတဲ့သူပဲ။ အသက်ချမ်းသာပေးဖို့မတောင်ပန်၊ သေနတ်နဲ့ချိန်တာကိုနည်းနည်းမှမကြောက်တဲ့ ကျနော်ပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးတဲ့သူပဲ။ ကျနော်ကိုမဖမ်းဖို့နဲ့ ရဲကိုသတင်းမပေးဖို့ လူကြီးလူကောင်းပီသစွာကတိပေးမလား?” “ငါကတိပေးပါတယ် မန်မတီဗရမ်း” ဆိုပီးထကာကျနော်သူနဲ့လရောင်အောက်မှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ မနက် ၂ နာရီတိတိဆိုတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ လရောင်အောက်မှာ မန်မတီဗရမ်း ဗိုလ်ဂေါ်ပြားနဲ့ကျနော်ဟာ စကားစမည်ပြောဆိုကာတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်မေးရင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကရင်းနှီးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေရင်းတွေလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ မန်မတီဗရမ်း ဗိုလ်ဂေါ်ပြားရဲ့နာမည်ရင်းဟာ Selvaraj ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာက သူ့အဖေနဲ့အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ရန်မီးကစတာပါ။ ဗိုလ်ဂေါ်ပြားဟာခပ်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးပြီး ဒီပြဿနာထဲမှာဝင်မပါပဲ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုပဲစိတ်ဝင်တစားလုပ်တဲ့ ရိုးရိုးသားသားလယ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ တနေ့ညမှာတော့ ရန်စရှိတဲ့အိမ်နီးနားချင်းက ဆွေမျိုးအချို့နဲ့ဂိုဏ်းဖွဲ့ပြီး သူ့အဖေအိမ်အပြန်မှာစောင့်ရိုက်ကာသတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ […]
300 Pageviews တနေ့ကအဖိုးအန်တိုနီယိုဘိုလီဗာနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးအန်တိုနီယိုဟာလက်တင်အမေရိကတော်လှန်ရေးအတွင်း ချီကွေဗားရားနောက်ကနေလိုက်ပြီး တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ဖူးသူပါ။ အဖိုးဟာ 🇲🇽မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် Emiliano Zapata အယ်မလီယာနိုဇာပါတာရဲ့အဆိုအမိန့်တွေကို ကျနော့်ကိုပြောပြခဲ့သူပါ။ “If there is no justice for people, let there be no peace for government. “ “ပြည်သူလူထုကိုတရားမျှတမှုမပေးတဲ့ ဘယ်အစိုးရမျိုးမဆို ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့မှမရဘူး” တဲ့ကွ။ O avō အဖိုးမတွေ့တာကြာပြီလို့ နှုတ်ဆက်တော့ သူ့ကမင်းတို့မြန်မာပြည်အခြေအနေဘယ်လိုလဲလို့ မေးပါတယ်။ တကယ်တော့အဖိုးအန်တိုနီယိုဘိုလီဗာနဲ့ ကျနော်စသိခဲ့တာ ၂၀၁၅ ကတည်းကပါ။ သူ့မြေး ဆိုင်မွန်ဘိုလီဗာဟာကျနော့်ကိုအတော်ခင်သူပါ။ Xiah ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဆော့ရင်း သူနဲ့ကျနော်နဲ့ မိုင်နိုတောတောင်ပေါ်မှာ မိုင်နိုတောအင်ပါယာကိုသတ်ဖို့အတူထိုင်စောင့်ရင်း ဘဝအကြောင်းစကားတွေအများကြီးပြောဖူးပါတယ်။ တစ်ခါတလေမိုင်နိုတောအင်ပါယာကိုတစ်ယောက်တစ်လှည့်အပျော်သတ်ရင်း သူရယ်ကျနော်ရယ် အီဂျစ်ကဗွန်ရယ် တောင်ထိပ်က🔥မီးပုံဘေးမှာ အတူစကားထိုင်ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်မွန်ဘိုလီဗာဆိုတာဘိုလီးဗီးယားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်မို့ ရာဇဝင်မေးရင်းသူ့အဖိုးအန်တိုနီယိုဘိုလီဗာနဲ့ပါသိလာခဲ့တာပါ။ အခုလည်းအဖိုးအန်တိုနီယိုကို အဖိုးချီကွေဗားရားနောက်ကနေ လိုက်ပြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပါဦးလို့ ကျနော်ကမေးပါတယ်။ “ဒီမှာ ရစ်ချတ် … အဲ့ဒါတွေထက် တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ချင်ရင် မဖြစ်မနေရှောင်ရမယ့်အချက်တွေကို မင်းကိုပြောပြမယ်” လို့ သူက လေးနက်တည်ကြည်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောပါတယ်။ မင်းကြားဖူးသလားမသိဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ် ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်ဟာ ပြင်သစ်ပြည်မှာလေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးတစ်ဖွဲ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ညစာစားတော့ သူက 🍷ဝိုင်ကလေးသောက်ချင်တယ်။ ပြင်သစ်မှာဝိုင်ကောင်းကောင်းသောက်ရမယ်မှတ်ထားတာကိုး။ ဧည့်သည်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ပါးနပ်တဲ့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်က ဝိုင်ပုလင်းတွေထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မိတ်ဆွေသောက်ပါ။ ကျနော်တို့ကိုကူညီလို့ ဧည့်ခံပါရစေတဲ့။ ခင်ဗျားတို့လည်းသောက်လေဆိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့ ပြင်သစ်ပြည်မလွတ်မြောက်မချင်း အရက်သေစာမသောက်သုံးဖို့ ကျနော်အဓိဌာန်ပြုထားတယ်တဲ့။ ကျနော်ဟာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ “အရက်သောက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကိုချမိလိမ့်မယ်” တဲ့။ မဟာမိတ်ပိုင်းလော့ဟာတော်လှန်ရေးစခန်းကပြင်သစ်သူလေးအတော်ချောတာကိုသတိထားမိပြီး ပိုးပန်းသတဲ့။ ပြင်သစ်သူလေကပြန်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲ။ ကျမတို့ပြည်ကြီးဟာ နာဇီတွေရဲ့လက်အောက်မှာကျရောက်နေတဲ့ ကံအဆိုးဆုံးကာလရောက်နေပါတယ်တဲ့။ မြို့ပေါ်မှာလူမဆန်အောင်အနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ကျမမမြင်ဖူးတဲ့ကျမရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရယ်၊ မတရားတဲ့ရန်သူကိုတိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုမေ့ပျောက်ပြီး ကျမအချစ်ရူးမထနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ကျမတို့နိုင်ငံမလွတ်မြောက်သေးသ၍ ဒါမျိုးကျမလက်ခံလို့မရပါဘူးတဲ့။ ကျမတို့ကိုရှင်တို့ကူညီနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကျမတို့ကိုယ်ကျမအားကိုးဖို့လိုပါတယ်တဲ့။ ကျမကိုချစ်ရင်ရှင်ဝင်တိုက်ပေးပါတဲ့။ ပြတ်ကရော။ ငါတို့တော်လှန်ရေးလုပ်တော့ ချီရှိတုန်းကအဆင်ပြေတယ်။ နောက်တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာ ကဂျိုးဂချောင်တွေနဲ့လုံးလည်ချာလည်လိုက်တော့တာပဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။ တို့ကကွာ တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ စစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းခွဲတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အပေါ်ပိုင်းတိုင်းကိုဦးစီးတဲ့အကောင်က ဒါသမားကွဆိုပြီး သူကပါးစပ်မှာလက်မတေ့ပြီး မော့တဲ့ပုံလုပ်ပြပါတယ်။ သဘောကတော့ အရက်သမားလို့ပြောချင်တာပါ။ အောက်ဖက်တိုင်းကိုဦးစီးတဲ့ နောက်ခေါင်းဆောင်တစ်ကောင်က ဒါသမားကွဆိုပြီး နှာခေါင်းကိုလက်ညိုးနဲ့ထိုးပြပါတယ်။ သဘောကတော့တော်လှန်ရေးလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ တော်လှန်ရေးထက်နှာဘူးထဖို့တွေးနေတဲ့သူလို့ ပြောချင်တာပါ။ မင်းတို့နိုင်ငံမှာမင်းပြောဖူးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာ ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလဲလို့မေးပါတယ်။ ဟာ … ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေက ခေါင်းဆောင်ပီသတယ်ဗျ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအရက်သောက်တယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမကြားဖူးဘူးဗျ။ အရက်ပုလင်းလိုက်ရှာရင်း ရဲအဖမ်းခံရတယ်လို့လည်းတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ပြီးတော့ နှာထပြီးတော်လှန်ရေးကိုအာရုံမစိုက်ပဲ မော်ဒယ်ကောင်မလေးကိုအာရုံစိုက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ကျနော်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အေး … အဲ့ဒါပဲ။ အဲ့ဒါက အရေးအကြီးဆုံးပဲကွလို့ သူကစားပွဲကို “ဒုံး” ကနဲထုပြီးစကားပြောပါတယ်။ […]
September 3, 2021 September 3, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအိမ်ရှေ့အိမ်ကမိန်းမကိုပတ်ရှောင်နေရတယ်။
326 Pageviews ရှောင်ဆိုကျနော် ဘယ်မြေဩဇာအမျိုးအစားထည့်ပြီးအပင်စိုက်သလဲလိုက်မေးနေတာကိုး။ တံဆိပ်မေးပြီး သူလိုက်ဝယ်မလို့တဲ့။ သူ့သမီးလည်းပန်းအိုးနဲ့ ? ခရမ်းသီးပင်ရယ်၊ ကိုက်လန်ပင်တွေရယ်စိုက်ထားတယ်။ သေချာဂရုတစိုက်ရေလောင်းရဲ့သားနဲ့ပိန်လိန်နေတာပဲတဲ့။ ကျနော် ပန်းအိုးသေးသေးလေးတစ်အိုးထဲမှာ ရှမ်းနံနံ (၂) ပင်ရယ်၊ ရှားစောင်းလက်ပပ် (၃) ပင်ရယ်၊ နဂါးမောက်သီးပင်ပေါက် (၁) ပင်ရယ်ထည့်စိုက်ထားတာ အိုကေနေတာကို သူသဘောကျနေတာ။ ပြဿနာက Richard Myo Thant ရှုရှုပေါက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတာသူမှမသိတာကိုး။ ?ဒါမျိုးကဘယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလဲ။ တော်ကြာသူတို့လည်း ရှုရှုပေါက်ပြီးလိုက်လောင်းနေရင် အိမ်နားမှာနံစော်ကုန်မယ်။ ကဲ … မြန်မာပြည်က ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေကိုတော့ secret formula ကိုမျှဝေလိုက်မယ်။ အပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့ NPK အချိုးအဆရယ်၊ နေရောင်ခြည်ရယ်၊ ရေဓာတ်ရယ်ကအရေးအကြီးဆုံးဗျ။ NPK ratio ဆိုတာ နိုက်ထရိုဂျင် N : ဖော့စဖောရပ် P : ပိုတက်ဆီယမ် K […]
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၄၃ သန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခြေလေးချောင်းနဲ့ဝေလငါးမျိုးနွယ်ရဲ့ အရိုးစုရုပ်ကြွင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
September 2, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၄၃ သန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခြေလေးချောင်းနဲ့ဝေလငါးမျိုးနွယ်ရဲ့ အရိုးစုရုပ်ကြွင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
266 Pageviews ဒီခြေလေးချောင်းနဲ့ဝေလငါးမျိုးနွယ်သတ္တဝါဟာ ကုန်းပေါ်မှာရော ရေထဲမှာပါ နှစ်နေရာသွားလာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်ကလည်းကြီး၊ သွားတွေကလည်းပါ၊ ကုန်းပေါ်ရောရေအောက်မှာပါသွားလာနိုင်တဲ့အတွက် အတော့်ကိုရှင်သန်နိုင်မယ့်သတ္တဝါလို့ထင်ထားစရာပါ။ အခုတော့ အဲ့ဒီသတ္တဝါမျိုးရှိမှန်းတောင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အခုမှသိတာပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အကောင်ကြီးလှပြီ၊ ကိုယ့်ဆွေခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်ဆက်စားဖို့အတွက် #အကုသိုလ်တွေစုပြုံယူပြီးလူသတ်ခိုးဆိုးနေသူတွေ သံဝေဂယူသင့်တဲ့အရာပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တည်မြဲတယ်လို့သိပ်ထင်မှတ်မနေပါနဲ့။ တနေ့ကျရင် သင်ရှိခဲ့မှန်းတောင် လူတွေရော သင့်မျိုးဆက်ရောကသိမှာမဟုတ်တော့ပါ။
September 2, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on အရက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
286 Pageviews ကိုဗစ်နဲ့အရက်ဘာဆိုင်သလဲလို့တွေးရင်မှားမယ်။ Lockdown ကာလမှာ ရှားပါးဝီစကီတန်ဖိုးဟာ ၂၅ ရာနှုန်းတက်သွားတယ်။ အိမ်ကိုသိန်း ၂၀၀၀ တန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမယ့်အစား အရက်သိန်း ၂၀၀၀ ဖိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရင် ၂၀၂၀ မှာ သိန်း ၂၅၀၀ ဖြစ်သွားမယ်။ ဒါကြောင့်အရက်ရဲ့တန်ဖိုးကို လူပိန်းတွေမသိဘူးလို့ ကျနော်ကပြောတာ။ အဲ့လိုပြောလို့အရက်သောက်တတ်လို့လားဆိုတော့ သောက်ရတာမကြိုက်ဘူး။ အရက်ပုလင်းတွေတော့ဝယ်စုထားချင်တယ်။ မသောက်တာက နာမည်ကျော် Frank Lloyd Wright ရဲ့စကားကို ကြားဖူးလို့လည်းပါတယ်။ “A man isafool is he drinks before he reaches the age of 50, andafool if he doesn’t afterward.” – Frank […]
316 Pageviews အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်ဟာ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီး သင်ခန်းစာယူတတ်မယ့်လူကြီးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဗီယက်နမ်တွေကတော့ Last Day of Saigon က အိမ်ခေါင်မိုးကို Sky 22 Rooftop Cafe တောင်ဖွင့်ထားတယ်။ တချိန်က သမိုင်းဝင်နေရာပေါ့။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ ဆိုင်ဂုံမြို့တော်ကြီးအကျမှာ ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းလို့မလွယ်တဲ့ ကပ်သီးကပ်သပ်ခေါင်မိုးလေးပေါ်မှာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ လူတွေကယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။